သင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင့်မျာ
သင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် WeChat အား မည်ကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဖန်တီးထားကြောင်း ပိုမိုနားလည်လာစေရန်၊ ထို့ပြင် သင်၏ ဒေတာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သင့် အခွင့်အရေးများအား ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာစေရန် အစရှိသည်တို့အတွက်ငှာ WeChat အနေနှင့် သင့်အား ပထမဆုံးအနေဖြင့် အောက်ပါ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ဦးစွာ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစေလိုပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ WeChat နောက်ဆုံးဗားရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ထိန်းမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအား သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးကာ၊ ထို့နောက် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်သည့် လိုအပ်သော အပိုဆောင်း အချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးစေလိုပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကာကွယ်မှု အကျဉ်းချုပ်
WeChat ၏ ပြန်လည်စိစစ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ထိန်းမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု
သင့် မွေးနေ့ရက်စွဲအား အတည်ပြုခြင်
We collect information when you set up your WeChat account and use the services available within WeChat (such as posting photos to your Moments feed or following Official Accounts). To set up your account, we collect your nickname, mobile number, andapassword. You can further refine and populate your profile with additional information. More...
We use third parties for support services, such as SMS service providers for account validation, mapping and points-of-interests services, translation services, and support services. We use these third party services solely to process or store your information for the purposes described in this policy. We also share your information with related group companies of Tencent and as required by law. Aside from the previously mentioned purposes, WeChat does not share your data to third-parties without your prior explicit consent. Any third party (selected by us) with whom we share user data will provide the same or equal protection of user data as stated in the this policy. More...
You may have special rights over your data and how we can use it. These include how you can access the data, erasing the data, restricting how your data can be used, objecting to its use, and gettingacopy of your information. More...
register by bindingamobile number that is made available to you in the People’s Republic of China (except for Taiwan, Hong Kong or Macau) (being the "PRC") ((i.e.,acontact number that uses international dialing code +86)); or
WeChat ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ
WeChat မှ ကြိုဆိုပါသည်။
သင်၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အလေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်ထည့်သွင်းပေးထားသော သို့မဟုတ် WeChat အသုံးပြုရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ ရွေးချယ်နိုင်မှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် အသိပေးထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ (WeChat မိုဘိုင်းအက်ပ်၊ www.wechat.com ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် WeChat အားထောက်ပံ့ပေးထားသော မည်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ပလက်ဖောင်းစနစ်များကိုမဆို) (အတူတကွအားဖြင့်"WeChat" ဟုခေါ်ပါသည်) အား အသုံးပြုခြင်းတွင် သင့်အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ပါဝင်ပါသည်။ဤအရာများ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်သည်နှင့် မည်ကဲ့သို့ သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို သေချာဂရုပြု၍ ဖတ်ရှုပေးပါ။
WeChat ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒနှင့်အညီ သင့်အချက်အလက်များအား ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သင်သဘောတူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အချို့သော ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်အသုံးပြုသောအခါ အချို့သော နည်းလမ်းများဖြင့် သင့်အချက်အလက်များအား ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သဘောတူညီပေးရန် သင့်အား မေးမြန်းပါလိမ့်မည် (ဥပမာအားဖြင့် တရားဝင်အကောင့်တစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းဖတ်ရှုရန် သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံ သင့်အချက်အလက်အား လွှဲပြောင်းမှုကို သဘောတူညီခြင်း ရှိမရှိ သင့်အား မေးမြန်းပါသည်)။ သင်၏ လိုလားမှုများနှင့် သင့်အချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းအား သင့်အကောင့်မှတဆင့် မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကို ဤနေရာ တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။အချို့သော အချက်အလက်များအတွက် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒနှင့်အညီ ထိုအချက်အလက်အား ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရန် သင်၏ သဘောတူညီချက်အား သင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒကို သင်သဘောမတူညီပါက WeChat ကို သင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ၌ "ကျွန်ုပ်","ကျွန်ုပ်တို့၏" သို့မဟုတ်"ကျွန်ုပ်တို့"သည် အောက်ပါတို့ကို ရည်ညွှန်းသည် -
သင်က ဥရောပ စီးပွားရေး နယ်မြေနှင့် ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသော အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင် - 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands တွင် တည်ရှိသော ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Tencent International Service Europe B.V.၊
သင်က ဥရောပ စီးပွားရေး နယ်မြေ၊ ဆွစ်ဇာလန် သို့မဟုတ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (တိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုတို့ မပါဝင်ပါ) ပြင်ပတွင် ရှိသော အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင် - 10 Anson Road, #21-07 International Plaza, Singapore 079903 တွင် တည်ရှိသော စင်္ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Tencent International Service Pte. Ltd.။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ သို့မဟုတ် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအား အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုသည်များ သို့မဟုတ် တိုင်ကြားလိုသည်များ ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေး အရာရှိထံ အီးမေးလ်လိပ်စာ dataprotection@wechat.com မှတဆင့် သို့မဟုတ် စာတိုက်လိပ်စာ 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands မှတဆင့် (အချက်အလက်ကာကွယ်ရေး အရာရှိ၊ ဥပဒေရေးရာဌာန ထံ လိပ်မူ) ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သို့မဟုတ် ယင်းအား ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ကြားလိုပါက အထက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ။ သင်က ဥရောပသမဂ္ဂတွင် နေထိုင်သူဖြစ်လျှင် သင့်နိုင်ငံ၏ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေး အာဏာပိုင်ထံ တိုင်ကြားမှုကို တင်ပို့နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိကြောင်း မှတ်သားပေးစေလိုပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှု
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒသည် WeChat နှင့်သာမက ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုသည် WeChat ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ရယူသုံးစွဲနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာအားဖြင့် - တရားဝင်အကောင့်များကို ဖော်လိုးလုပ်သော သို့မဟုတ် အသုံးပြုသော အသုံးပြုသူများ၊ Mini ပရိုဂရမ်များနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ အက်ပ်မ်များအတွက် WeChat လော့အင်ဝင်ရောက်မှု) အသုံးပြုခြင်းနှင့် အကျုံးဝင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးဖြင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ထို WeChat ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ယင်းတို့ကို သင်အသုံးပြုလျင် မဖြစ်မနေ သင်လက်ခံသဘောတူရမည့် အခြားသော ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆက်စပ်စည်းမျဉ်းများ ရှိနေဖွယ်ရှိပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒပါ စာလုံးအမည်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည့် စည်းမျဉ်းအား ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် သီးခြားအနက်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိပါက WeChat ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် သာတူညီမျှ အနက်ဖွင့်ဆိုထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဆိုလိုရင်း တူညီပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒသည် ဖွင့်ချရန် သို့မဟုတ် တင်သွားရန် သင်ရွေးချယ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များဖြင့် အကျုံးမဝင်ခြင်းအား ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်ပေးပါ။
က) WeChat မှအပ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒဖြင့် အကျုံးဝင်သည်ဟု တိတိပပ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများက ပံ့ပိုးေ့းပေးသော သို့မဟုတ် လည်ပတ်သော အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့)
ခ) WeChat မှတစ်ဆင့် သင်ရယူအသုံးပြုဖွယ်ရှိသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ ဝန်ဆောင်မှုများ (ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင်) သို့မဟုတ်
ဂ) WeChat ပေါ်ရှိ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကြော်ငြာသည့် ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ
သင်သည် ကုမ္ပဏီ၊ စီးပွားဖက်၊ အသင်းအပင်း၊ အစိုးရ သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်း (သင်၏ "အဖွဲ့အစည်း" ), ကိုယ်စား WeChat ကို အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ပါက သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ သက်ဆိုင်ရာတစ်သီးပုဂ္ဂလ ပိုင်ရှင်များ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ ရုံးအုပ်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားဆက်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ( "ချိတ်ဆက်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ" ) ကို အချိန်အခါအားလျော်စွာ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းခြင်း သို့မဟုတ် သင်ထုတ်ပေးခြင်း အကြောင်းအား ၄င်းတို့ထံ အသိပေးရန် သဘောတူသည့်အပြင် အကျုံးဝင်သော ဥပဒေ နည်းဥပဒေများတွင် ပြဌာန်းထားသကဲ့သို့ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒနှင့်အညီ ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် သင်ချိတ်ဆက်ပေးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သဘောတူညီမှုကို ရယူရန်အတွက်လည်း သင်သဘောတူပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒတွင် "သင်" သို့မဟုတ် "သင်၏" ဟု ရည်ညွှန်းသောအခါ ဤရည်ညွှန်းချက်တွင် သင်နှင့်အတူ ချိတ်ဆက်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များက သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာဘေ့စ်မှ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ dataprotection@wechat.com မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝါဒအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုမူဝါဒအတွင်းသို့ အတိကျဖော်ပြထားသော ညွှန်ကြားချက်များ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ကို အချိန်အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်သွားဖွယ် ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်များ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
သင်သိရှိရန် အရေးကြီးသည့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည့် အခါတိုင်းတွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒအား အပြောင်းအလဲများ စတင်အသက်မဝင်မီတွင် ဤလင့်ခ်ပေါ်၌ ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ WeChat သို့မဟုတ် အခြားသော နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် သင့်ထံ အသိပေးသွားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စီမံဆောင်ရွက်သော သတင်းအချက်အလက် အမျိုးအစားများ
WeChat ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖော်ဆောင်ပေးအပ်ရာတွင် မတူညီသော သတင်းအချက်အလက် အမျိုးအစားများကို ကျွန်ုပ်တို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။ ဤသည်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
"တည်နေရာ အချက်အလက်" မှာ သင်၏ GPS၊ WiFi၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင်၊ မြန်နှုန်းတိုင်းကိရိယာ၊ IP လိပ်စာ သို့မဟုတ် တည်နေရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်နေသော အများမြင်နိုင်သည့် ပို့စ်များမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြား WeChat အသုံးပြုသူများသို့ သင်၏တည်နေရာ အချက်အလက်အချို့ ဖော်ပြပေးပေလိမ့်မည်
People Nearby၊ POI ရှာဖွေမှုနှင့် WeRun တို့ကဲ့သို့ အချို့သော တည်နေရာအခြေပြုဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်အသုံးပြုသောအချိန်များနှင့် အခြားသော WeChat အသုံးပြုသူများသို့ သင့်တည်နေရာကို မျှဝေသော အချိန်များ၊
သင့်အကောင့်အတွင်းသို့ အကြိမ်ကြိမမ်အခါခါ သို့မဟုတ် မရိုးသားစွာ အကောင့်ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် သင်၏ IP လိပ်စာ၊ စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများမှ တည်နေရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ယူသည့်အလျောက် WeChat ကို သင်ရယူသုံးစွဲသောအခါ
"လော့ဂ်ဒေတာ" ဆိုသည်မှာ ကွတ်ကီများ၊ ဝဘ်ဘီကွန်များ၊ လော့ဂ်ဖိုင်များ၊ ပရိုဂရမ်ထိန်း စာသားများ သို့မဟုတ် ETag များ (ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီအသုံးပြုမှု မူဝါဒ, တွင် အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့တွင် ပါဝင်သည့်အချက်များမှာ
သင်၏ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူဖြင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များ၊ WeChat ရယူသုံးစွဲရန် သင်အသုံးပြုသည့် သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာ သို့မဟုတ် အခြားသော ပရိုဂရမ်အားဖြင့် ရရှိနိုင်စေသော ပုံဖော်ရေး သတင်းအချက်အလက်များ၊ သင်၏ IP လိပ်စာ သို့မဟုတ် သင့်စက်ပစ္စည်း ဗားရှင်းနှင့် အတည်ပြုနံပါတ်များကဲ့သို့သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊
WeChat အသုံးပြုရာတွင် သင်ရယူသုံးစွဲခဲ့သည့် သို့မဟုတ် တောင်းခံခဲ့သည့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်များ၊ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည့် လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာ ပရိုဖိုင်များနှင့် အသုံးပြုခဲ့သည့် ဝဘ်အခြေပြု ရှာဖွေရေး ဝေါဟာရများကဲ့သို့ WeChat ကို သင်အသုံးပြုနေစဉ်တွင် သင်ရှာဖွေကြည့်ရှုခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များ
သင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သည့် အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ မှတ်ပုံတင်နှင့်အချိန်၊ သင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သော ဒေတာများနှင့် ကြာချိန် (တရားဝင်အကောင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပံ့ပိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖြင့် သင်ဆက်သွယ်ခြင်းမှအပ ထိုသို့သော ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများပါ အကြောင်းအရာများ မပါဝင်ပါ) ကဲ့သို့သော ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများဖြင့် ဆက်စပ်သော အထွေထွေ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်
ရိုက်ကူးလိုက်သည့် သို့မဟုတ် ပို့စ်တင်လိုက်သည့် သင်မျှဝေထားသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗွီဒီယိုတစ်ခု၏ ရက်စွဲ၊ အချိန် သို့မဟုတ် တည်နေရာများကဲ့သို့ WeChat မှတစ်ဆင့် သင်ပေးအပ်ထားသော အကြောင်းအရာများဖြင့် ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းသော မီတာဒေတာ။
"ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်မသဖြင့် မသက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ"ဆိုသည်မှာ သင့်အား ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖော်ထုတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆိုလိုပါသည်။
"တစ်ကိုယ်ရည်ရေသတင်းအချက်အလက်များ" ဆိုသည်မှာ သင့်အား ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖော်ထုတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆိုလိုပါသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် "သင့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စီမံဆောင်ရွက်ပုံ"အကြောင်းတွင် ဥပမာပြု ဖော်ပြပေးထားသော တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကိုယ်ရည် သတင်းအချက်အလက်များ(နှင့် ထိုသို့သော တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကိုယ်ရည်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပုံများအား) ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
"မျှဝေထားသော သတင်းအချက်အလက်များ" များဆိုသည်မှာ WeChat ပေါ်တွင် သင့်သဘောဆန္ဒအလျောက် မျှဝေထားသည့် သင့်အကြောင်း သို့မဟုတ် သင်နှင့်ဆက်စပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဆိုလိုပါသည်။ မျှဝေထားသော သတင်းအချက်အလက်များတွင် သင်တင်ထားသော ပို့စ်များ သို့မဟုတ် ရေးသားတင်ပြချက်များ (သင်၏ အများမြင်နိုင်သော ပရိုဖိုင်၊ သင်ဖန်တီးထားသော စာရင်းများနှင့် သင့်စက်ပစ္စည်း၏ ကင်မရာ သို့မဟုတ် မိုက်ကရိုဖုန်းဆင်ဆာ သို့မဟုတ် ထိုနှစ်မျိုးစလုံးအားဖြင့် သင်က ကြိုတင်သဘောတူခွင့်ပြုထားသည့် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် အသံဖိုင်မှတ်တမ်းများ အပါအဝင် )၊ သင်က ပြန်တင်ထားသော အခြားသူများ၏ ပို့စ်များနှင့် ထိုသို့သော ပို့စ်များဖြင့် ဆက်စပ်သည့် တည်နေရာ အချက်အလက်နှင့် လော့ဂ်ဒေတာများကဲ့သို့ WeChat ပေါ်၌ သင်တင်ထားသည့် ပို့စ်များ ပါဝင်ဖွယ် ရှိပါသည်။မျှဝေထားသော သတင်းအချက်အလက်များတွင် အခြားသူများက WeChat ကို အသုံးပြုကာ သင့်အကြောင်း မျှဝေထားသည့် သင့်သတင်းအချက်အလက်များလည်း (တည်နေရာ အချက်အလက်နှင့် လော့ဂ်ဒေတာအပါအဝင်) ပါဝင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပါ"သတင်းအချက်အလက်များ" အတွက် အညွှန်းများ ဆိုသည်မှာ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကိုယ်ရည် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြင့် မသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်နှစ်မျိုးစလုံးကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါတို့သည် မည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား မိမိတို့ကောက်ခံသည်၊ မည်သို့အသုံးပြုသည် (နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ္မဂ ဥပဒေ၏အောက်တွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ဥပဒေရေးရာအခြေခံအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မှု) တို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
စာရင်းသွင်းမှု အချက်အလက်နှင့် အကောင့်ဝင်ရောက်မှု အချက်အလက် သင့်အမည်၊ အခြားအမည်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ စကားဝှက်၊ ကျား၊ မ နှင့် IP လိပ်စာ။
ဥပဒေရေးရာအခြေခံ (အီးယူ): စာချုပ်
WeChat ပေါ်တွင် အသုံးပြုသူအကောင့်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်နှင့် အကောင့်ဝင်ရောက်ရန်၊
WeChat ၏ ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းကို သင့်အား အသိပေးရန်၊/1}
မိမိတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် မူဝါဒများအား ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊
WeChat ကိုအသုံးပြု၍ VoIP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေရန်၊
တစ်ဦးစီအလိုက် အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်။
WeChat ကိုသင်မည်သို့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်နိုင်ရန်၊
ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊
ဘာသာစကားနှင့် တည်နေရာကို သုံးစွဲသူစိတ်တိုင်းကျ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်၊
ငါတို့ဥစ္စာ, ငါတို့ Affiliate ကုမ္ပဏီများ, သို့မဟုတ် WeChat ၏အခြားအသုံးပြုသူများမဆိုအခွင့်အရေး, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, နှင့်
WeChat စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း, ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စမ်းသပ်, သုတေသန, လုံခြုံရေး, လိမ်လည်မှု-detection စနစ်, အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်တမ်းရည်ရွယ်ချက်များအပါအဝင်ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်
ငါတို့ဥဈစာ, ငါတို့ Affiliate ကုမ်ပဏီမြား, သို့မဟုတျ WeChat ၏အခွားအသုံးပွုသူမြားမဆိုအခှငျ့အရေး, ပစ်စညျးဥစ်စာပိုငျဆိုငျမှုသို့မဟုတျဘေးကငျးလုံခွုံမှုကာကှယျစောငျ့ရှောကျရနျ, နှငျ့
WeChat စီမံခနျ့ခှဲခွငျးနှငျ့ပွဿနာဖွရှေငျးခွငျး, ဒတောခှဲခွမျးစိတျဖွာ, စမျးသပျ, သုတသေန, လုံခွုံရေး, လိမျလညျမှု-detection စနဈ, အကောငျ့စီမံခနျ့ခှဲမှုနှငျ့စဈတမျးရညျရှယျခကျြမြားအပါအဝငျပွညျတှငျးစဈဆငျရေးမြားအတှကျရနျ။
အသုံးပြုသူပရိုဖိုင် ရှာဖွေမှု အချက်အလက်။ ရှာဖွေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းခြင်း။
ဥပဒေရေးရာအခြေခံ (အီးယူ) - စာချုပ်
ယခင်ရှာဖွေထားမှုများကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီအောင် ပံ့ပိုးနိုင်ရန်။
မျှဝေသည့် အချက်အလက်များ - ပရိုဖိုင် အချက်အလက် လူအများမြင်တွေ့နိုင်သည့် သင့် WeChat ပရိုဖိုင်တွင်ပါဝင်သည့် သင့်ပရိုဖိုင် ID၊ အမည်နှင့် ဓါတ်ပုံအပါအဝင် အချက်အလက်အားလုံး။
သင့်ညွှန်ကြားချက်၊ တောင်းခံမှုများနှင့်အညီ WeChat ပလက်ဖောင်းအား စီမံကွပ်ကဲရန်၊
မျှဝေသည့် အချက်အလက်များ - ပရိုဖိုင် မီဒီယာ ဤအပိုင်းတွင် WeChat မှတဆင့် အခြားအသုံးစွဲသူများသို့ သင်မျှဝေထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးပါဝင်ပြီး
WeChat Moments ပို့စ်များနှင့် အခြားသုံးစွဲသူများ၏ WeChat Moments များကို တုံ့ပြန်ထားမှုများ၊
အခြားသုံးစွဲသူများမှ ၎င်းတို့၏ WeChat သုံးစွဲမှုမှတဆင့် မျှဝေထားသည့် သင့်အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များ - ဥပမာ - အခြားသုံးစွဲသူများမှ ၎င်းတို့၏ WeChat သုံးစွဲမှုများဖြစ်သည့် WeChat Moments နှင့် သင့်နှင့်အခြားသူများထံ WeChat အသုံးပြု ဆက်သွယ်ထားမှုများမှတဆင့် မျှဝေထားသည့် သင့်အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များ။
WeChat ပလက်ဖောင်းအား စီမံကွပ်ကဲရန်၊
သင့် WeChat ကို ထိန်းသိမ်းစီမံရန်၊
အကောင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထပ်တိုးလုံခြုံရေး Voiceprint (သင့်အတွက် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု)၊ အရေးပေါ် အဆက်အသွယ်၊ စီမံထားသည့် ကိရိယာများ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ Facebook ချိတ်ဆက်မှု OpenID၊ Facebook ချိတ်ဆက်မှု တိုကင်၊ QQ ID။
စာရေးသားပေးပို့မှု အချက်အလက်။ သင်နှင့် အခြားအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများပါဝင်သည့်အဖွဲ့ တို့အကြား ဆက်သွယ်ရေးသားသည့် အချက်အလက်များ။ အဆိုပါအချက်အလက်များကို သင့်ကိရိယာနှင့် သင်ပေးပို့ဆက်သွယ်သည့် အသုံးပြုသူများ၏ ကိရိယာများအပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် အဆိုပါအချက်အလက်များအား မိမိတို့၏ ဆာဗာများအပေါ်တွင် ပုံသေသိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိသည့်အပြင် အဆိုပါအချက်အလက်များအား သင်တို့ပေးပို့လိုသည့်နေရာ ရောက်ရှိနိုင်စေရန် ပေးပို့သည့် အခါမှသာ မိမိတို့ဆာဗာများသို့ ဖြတ်သန်း၍ ပေးပို့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးရန်။
အဆက်အသွယ်များ စာရင်း။ သင့်ကိရိယာပေါ်ရှိ အဆက်အသွယ်စာရင်း။
အခြားသော WeChat သုံးစွဲသူများမှ "အကြံပြုထားသည့် သူငယ်ချင်းများ" ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြု၍ သင်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်။
OpenID။ သင့် WeChat အကောင့်မှ တတိယကြားခံ WeChat Open Platform ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိတို့အနေဖြင့် OpenID တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဤဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် - ဥပမာ - သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ တို့ကို အသုံးမပြုပဲ အကောင့်တစ်ခုမှ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်သည့်အချိန်တွင်သာ တည်ရှိသည့် ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် ရှာဖွေစိစစ်မှုဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင့် WeChat အကောင့်မှ အခြား ကြားခံ operator တစ်ခုမှ လုပ်ဆောင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ချိတ်ဆက်သည့်အခါတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် UnionID တစ်ခုကို ဖန်တီးပါသည်။ ဤဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်သည် တတိယကြားခံ operator များကို တူညီသည့် operator မှ ပေးအပ်သည့် အမျိုးမျိုးသော ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သင်အသုံးပြုခဲ့သည်များကို အလွယ်တကူပင် ရယူချိတ်ဆက်ခွင့် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အား တရားဝင်အကောင့်တစ်ခုကို ခြေရာခံသိရှိခွင့် ပြုရန်၊
သင့်အား မီနီပရိုဂရမ်တစ်ခုကို အသုံးပြုခွင့် ပြုရန်နှင့်
သင့်အား သင့် WeChat ID ကိုအသုံးပြု၍ ကြားခံ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန်။
log အချက်အလက်။ အဓိပ္ပါယ်ကို အထက်တွင်ရှုပါ။
ဥပဒေရေးရာအခြေခံ (အီးယူ) - တရားဝင် အကျိုးစီးပွားများ
WeChat ကို သင်မည်သို့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်နိုင်ရန်၊
WeChat အား စီမံကွပ်ကဲရန်၊
ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ လုံခြုံရေး၊ လိမ်လည်မှု-ခြေရာခံခြင်း၊ အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စစ်တမ်းကောက်ယူယူမှု အပါအဝင် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊
တည်နေရာ အချက်အလက်များ။ အဓိပ္ပါယ်ကို အထက်တွင်ရှုပါ။
တရုတ်ပြည့်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံပြင်ပတွင် အသုံးပြုသောအခါ တည်နေရာပြအချက်အလက်ကို အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းသည် HERE အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း နှင့် HERE ကိုယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့် မူဝါဒ တို့ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပေးပါ။
လုံခြုံရေး၊ မသမာမှု-ခြေရာခံခြင်းနှင့် အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု (ဥပမာ - သင့်အကောင့်အတွင်းသို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ အကောင့်ဝင်ရောက်ခြင်းများ သို့မဟုတ် မသင်္ကာဖွယ်ရာ အကောင့်ဝင်ရောက်မှုများ မရှိစေရန်)။
သင်အသုံးပြုလိုသည့် တည်နေရာအခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်။
တည်နေရာမျှဝေခြင်း (အခြားသူများနှင့် ရေးသားဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတွင် သင့်တည်နေရာကို မျှဝေရန် သင်ရွေးချယ်သည့်အခါ)၊
Moments/ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက် (Moments ပို့စ် တစ်ခုတွင် တည်နေရာတစ်ခုအား တည်နေရာအခြေပြုချိတ်ဆက်ခြင်း)၊
WeRun (သင်၏ အရှိန်တိုင်းကိရိယာနှင့် gy ကို WeChat အား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန် သင်ရွေးချယ်သည့်အခါ)
တရားဝင်အကောင့်များ (သင့်တည်နေရာအား တရားဝင်အကောင့်တစ်ခုကို ပြသရန် သင်ရွေးချယ်သည့်အခါ အဆိုပါအချက်အလက်အား တရားဝင်အကောင့်နှင့် မျှဝေသွားမည်)၊
မီနီပရိုဂရမ် (သင့်တည်နေရာအား မီနီပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့ ပြသရန် သင်ရွေးချယ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် အနီးအနားရှိ မီနီပရိုဂရမ်များကို ရှာဖွေရန် သင်ရွေးချယ်သည့်အခါ)
အနီးအနားရှိလူများ၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ပုလင်းထဲတွင် စာထည့်ပို့ခြင်း (အဆိုပါဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များသည် တည်နေရာအခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် သင့်ယေဘုယျတည်နေရာကို အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် မျှဝေရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် (ထို့အပြင် အဆိုပါတည်နေရာအချက်အလက်များအား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဖယ်ရှားပစ်ရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်)၊
ထိပ်တန်းသတင်းများ (ဤဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်ကို သင်ရယူပါက မိမိတို့အနေဖြင့် သင့်တည်နေရာကို အသုံးပြု၍ သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့် ဒေသတွင်းအချက်အလက်များကို ချိန်ညှိပြသပေးပါမည်)၊/1}
ရှာဖွေမှု (အကယ်၍ WeChat ကိုအသုံးပြု၍ ပြင်ပရှာဖွေမှုများကို သင်လုပ်ဆောင်ပါက ဝန်ဆောင်မှုမှ သင့်တည်နေရာကို အသုံးပြု၍ သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့် ဒေသတွင်း အချက်အလက်များကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးပါမည်)၊
ဥပဒေရေးရာအခြေခံ (အီးယူ) - မိမိတို့အနေဖြင့် ဤအချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာ၍ ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံလုပ်ဆောင်ပါမည်။
အချို့ဒေသများတွင် ခရက်ဒစ်ကတ်အချက်အလက်များကို ကောက်ခံရယူပြီး ကတ်အချက်အလက်များကို ကြားခံငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် သက်ငယ်အသုံးပြုသူမှ WeChat သုံးစွဲနေမှုကို မိဘ (သို့မဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူမှ သဘောတူညီမှုကို အတည်ပြုရန်ရည်ရွယ်၍ အတည်ပြုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို WeChat ၏ ဆာဗာများတွင် ပုံသေသိမ်းဆည်းထားမည် မဟုတ်ပဲ ကြားခံငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုမှ အတည်ပြုမှုကို လုပ်ဆောင်ပြီးပါက ချက်ချင်းပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအချက်အလက်။ မိမိတို့၏ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကို သင်တို့ပေးပို့သည့် အချက်အလက်များအားလုံး။
ကိရိယာအချက်အလက်။ သင့်ကိရိယာပေါ်တွင် သိမ်းထားသည့် မီဒီယာ။
WeChat ကို အသုံးပြု၍ အဆိုပါမီဒီယာအား မျှဝေခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးရန်။
လှူုမှုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု အချက်အလက်။ သင့် QQ ID သို့မဟုတ် (ရှိပါက) Facebook ချိတ်ဆက်မှု တိုကင်။
သင့် WeChat အကောင့်ကို ကြားခံဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန် သင်ရွေးချယ်ပါက မိမိတို့အနေဖြင့် အဆိုပါ အချက်အလက်အား WeChat ကို ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်မှတဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင်သည် Moments ပေါ်တွင် ရေးသားထုတ်လွှင့်ပါ ရေးသားမှုအား ကြားခံအကောင့်တွင် မျှဝေရန် သင်တောင်းခံသည့်အခါတွင် WeChat အနေဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည့် တတိယ လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွင် ထုတ်လွှင့်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
စစ်တမ်းကောက်ခံမှုများ။ သင်သည် စစ်တမ်းကောက်ခံမှုတွင် ပါဝင်ရန်ရွေးချယ်ပါက မိမိတို့အနေဖြင့် သင့်ထံမှ အချို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တောင်းခံမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် အဆိုပါစစ်တမ်းကောက်ခံမှုမမျာားကျိားကို ကြားခံဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုအား သင်စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ဖြေဆိုမှုမပြီးခင်တွင် သင့်အား အသိပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
WeChat ကိုသင်မည်သို့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်နိုင်ရန်၊/1}
စိတ်ကြိုက်အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်၊
WeChat အား ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူ တောင်းခံမှုများ၊ လိုလားချက်များကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ရန်။
ပြိုင်ပွဲ အချက်အလက်။ WeChat မှ ပြုလုပ်သည့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအား ဝင်ရောက်ရန်အတွက် မိမိတို့အား သင်ပေးပို့သည့် အချက်အလက်အားလုံး။
ပြိုင်ပွဲတွင် သင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်။
အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့် စုစည်းထားသည့် အချက်အလက်များ မိမိတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်စေရန် အချို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များ များကို စုပေါင်း၍ လျို့ဝှက်ရပါသည်။
အက်ပ်အသုံးပြုမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ထိုအက်ပ်အတွင်း မည်သည့် ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြုလုပ်ထားသည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။
လိမ်လည်မှု ခြေရာခံရန်နှင့် အကောင့်လုံခြုံမှု လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
နေရာဒေသ၊ ဖုန်းမော်ဒယ်၊ ဖုန်းလုပ်ဆောင်မှုစနစ်၊ စနစ်အသုံးပြုထားသည့် ဘာသာစကားနှင့် WeChat ဗားရှင်း စသည့် သုံးစွဲသူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မိမိတို့၏ အသုံးပြုသူများမှ WeChat အား မည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်အောင် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း။
အသုံးပြုသူများသည် WeChat Open Platform ပေါ်တွင် ကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူအသုံးပြုသည့်အခါ မည်သည့် အကြောင်းအရာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေသည့် ဝဘ်နှင့် အကောင့် အသွားအလာ စာရင်းဇယားများအား နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြု​၍ WeChat အသုံးပြုသူများမှ ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား မည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကို အခြေခံ လေ့လာမှုပြုလုပ် အသိပေးခြင်း။
ကွတ်ကီးများ။ ယခုကဲ့သို့ စုဆောင်းမှုများအား "Tracking Technologies" အပိုင်းတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါမည်။
ဥပဒေရေးရာအခြေခံ (အီးယူ):** စာချုပ်
အကောင့်ဝင်ရောက်မှုနှင့် အကောင့်အတည်ပြုမှုများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်။
ကြော်ငြာတင်ခြင်းနှင့် အခြားသော ဈေးကွက်တင်ခြင်း၊ ပရိုမိုးရှင်းဆိုင်ရာ ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ထိရောက်မှုကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်။
WeChat ၏ ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်အချို့အား အချို့စီရင်စုမှ သုံးစွဲသူများသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များကို မိမိတို့အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ထပ်တိုးအချက်အလက်များအဖြစ် စုစည်းရယူပါသည်။
အပိုဆောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဒေတာများ - အတည်ပြုပြီးအကောင့်။ နိုင်ငံသား၊ မွေးရက်၊ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာရာလုပ်စာ၊ နေရာလိပ်စာထောက်ခံချက် မိတ္တူ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထောက်ခံချက်မိတ္တူ (ဥပမာ - နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်၊ နေရပ်ပြန်ခွင့်လက်မှတ်၊ စသည်)၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု အရင်းအမြစ်၊
ရရှိနိုင်မှု - ဤဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်အား အချို့သော စီရင်စုများ (ဥပမာ - ဟောင်ကောင်) တွင် ဖုန်းနံပါတ်နှင့်တကွ ထုတ်ဝေထားသည့် သုံးစွဲသူများသာ ရရှိပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် အကောင့်အတည်ပြုရန် တောင်းခံပါက (ထပ်တိုးငွေပေးချေမှု၊ WeChat ရှိ ငွေပေးချေမှု ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ရန်) မိမိတို့အနေဖြင့် ဤအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်။
ငွေပေးချေမှုနှင့် ရန်ပုံငွေ ပေးသွင်းမှုများကို ကူညီပံ့ပိုးရန်။
ငွေပေးချေမှု အချက်အလက်။ သင့်ခရကစ်ဒစ်ကတ်နံပါတ်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၊ CVC နှင့် ကတ်ကိုင်ဆောင်သူ အမည် ငွေပေးချေမှုတစ်ခုအား ကြားခံငွေပေးချေမှု ပံ့ပိုးလုပ်ဆာင်သူမှ ဆောင်ရွက်သည့်အခါ မိမိတို့အနေဖြင့် ငွေပေးချေမှုအချက်အလက် အတိုချုပ်ကို ရရှိသော်လည်း မည်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုမျှ ရယူ၊ သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
ရရှိနိုင်မှု - ဤဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်အား အချို့သော စီရင်စုများ (ဥပမာ - ဟောင်ကောင်) တွင် ဖုန်းနံပါတ်နှင့်တကွ ထုတ်ဝေထားသည့် သုံးစွဲသူများသာ ရရှိပါမည်။
WeChat အတွင်း သင်၏ ဝယ်ယူမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးရန်နှင့်
သင့် WeChat Pay အကောင့်ဖန်တီးရာတွင် သင့်အမည်မှန်ကို အတည်ပြုရန်၊
သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား မျှဝေခြင်း
အောက်တွင် ဖော်ပြထားခြင်းများမှလွဲ၍ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော လွှဲပြောင်းမှုများအား သင်ခွင့်ပြုထားသော အခြေအနေများမှလွဲ၍ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မည်သည့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မှ မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
ထိုအချက်အလက်များကို တောင်းခံရန် ဥပဒေ အခြေခံအချက်များနှင့် မှန်ကန်သော တရားစီရင်ချက်များအရ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသူများနှင့်သာ သင့်အချက်အလက်များကို မျှဝေပါသည်။ ထိုတောင်းခံရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိသူများတွင် ပါဝင်သည်များမှာ -
အစိုးရ၊ လူထု၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ၊ တရားစီရင်မှုဆိုင်ရာနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ဌာနများ သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်များ - သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ သို့မဟုတ် ပြဌာန်းချက်များ၊ တရားရုံးအမိန့်၊ သမ္မာန်စာ သို့မဟုတ် အခြား ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများထံမှ တောင်းခံမှုအရ တရားဥပဒေနှင့်အညီ ထုတ်ပြန်ပေးရခြင်းနှင့် တောင်းခံသော အဖွဲ့အစည်းတွင် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ရယူရန် တရားဝင် အခွင့်အာဏာရှိလျှင်၊
ဆက်နွယ်သည့် ကုမ္ပဏီအုပ်စုများ - Tencent International Service Europe BV (နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည်)၊ Tencent International Service Pte. Ltd (စင်္ကာပူတွင် တည်ရှိသည်)၊ WeChat International Pte Ltd (စင်္ကာပူတွင် တည်ရှိသည်) နှင့် ဟောင်ကောင်နှင့် ကနေဒါဆာဗာများအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော Oriental Power Holdings Limited (ဟောင်ကောင်တွင် တည်ရှိသည်) နှင့် WeChat International (Canada) Limited (ကနေဒါတွင် တည်ရှိသည်) တို့အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီများအုပ်စုတွင် သင့်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မျှဝေပါသည် -
သင့်ထံ WeChat ကို ထောက်ပံ့ပေးရန်၊ အထက်ဖော်ပြပါ "သင့်အချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ ကောက်ယူ၍ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသလဲ" ကဏ္ဍအောက်တွင် သတ်မှတ်ထားချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေရန်နှင့် WeChat အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်အရေးများကို ပြဌာန်းရန်။ ထို့အပြင်
ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းဖော်များ၏ လုပ်ငန်းများကို ရုံးတွင်းပိုင်း ပြန်လည်ပုံစံတည်ဆောက်ရာတွင် သို့မဟုတ် WeChat သို့မဟုတ် ယင်း၏ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံသို့ ရောင်းချရာတွင် WeChat ကို လက်ခံရယူ၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ မဟုတ်ဘဲ ကွဲပြားမည်ဖြစ်၍ သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးသူများ - ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးသူများ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးသူများ။ ယင်းတို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စား SMS ပို့ပေးသည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးသူများ၊ ပုံမှန် ဖုန်းဝန်ဆောင်မှု ကတ် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုပေးခြင်း ကို ချိတ်ဆက်ပေးရန် VoIP ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ အရှိန်မြှင့်တင်မှု တည်နေရာများနှင့် အကြောင်းအရာများ ပို့ပေးသည့် ကွန်ရက်များကို အသုံးပြု၍ သင့်ဒေသအတွင်း သင့်ထံ အကြောင်းအရာများ ပို့ပေးမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးပေးသူများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည် တည်နေရာနှင့် မြေပုံနေရာချထားသည့်ဒေတာကို ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။
WeChat တရားဝင်အကောင့်များနှင့် အသေးစားအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ တရားဝင်အကောင့် / အသေးစားအစီအစဉ် / ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအတွက် WeChat ဝင်ရောက်မှု စသည့် သင်စောင့်ကြည့်ဖတ်ရှုရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် သင်ရွေးချယ်ထားလျှင် WeChat ကို ဝင်ရောက်ရန် သင်ရွေးချယ်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံမှ အက်ပ်များမှတဆင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ။
သင်၏ WeChat အဆက်အသွယ်များနှင့် အခြား WeChat အသုံးပြုသူများနှင့် အချို့အချက်အလက်များကို လူသိရှင်ကြား မျှဝေနိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပေးထားပါသည်။ သင့်အကောင့်ဆက်တင်များတွင် ရှိသော "ဖုန်းနံပါတ်၊ WeChat ID သို့မဟုတ် QQ ID နှင့် ရှာဖွေခြင်းအား ခွင့်ပြုမည်" ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးဖြင့် သင့်ပရိုဖိုင်ကို လူအများက ဝင်ကြည့်ခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းမှ အချိန်မရွေး ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အခြား WeChat အသုံးပြုသူများက သင့်အားရှာဖွေနိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါ။ ဤကဲ့သို့သော အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်အမျိုးအစားကို မျှဝေသော အချက်အလက်များဟု ညွှန်းဆိုပါသည်။ မျှဝေသော အချက်အလက်များသည် မျှဝေသူ သင် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူက ယင်းအား ထိန်းသိမ်းထားသမျှ ကာလပတ်လုံး လူအများက ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မျှဝေသော အချက်အလက်များကို သင်ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးလျှင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖော်မဟုတ်သော ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိသော အခြား အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ယင်းကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ ကူးယူထားခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းထားခြင်း သို့မဟုတ် လူအများ ဆက်လက်သိရှိရယူနေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က လူအများသိအောင် ပြုလုပ်ထားသော သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ပယ်ဖျက်ပေးရန် သင်တောင်းခံခဲ့ပါက ပယ်ဖျက်ပေးရန် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံလျှင် ထိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ပြသနေသော သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များထံ လင့်ခ်ကို ပံ့ပိုးပေးနေသူ အခြားလူများကိုပါ ပြောပြပေးရန် သင့်လျော်သော အဆင့်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားပေးပါမည်။
WeChat မှတဆင့် မည်သည့်အရာများ တင်ပြမည်နှင့် ဆက်သွယ်မည်ကို သေချာဂရုပြု၍ စဉ်းစားပေးပါ။ အချို့သော အခြေအနေများတွင် WeChat အတွင်းရှိ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဆက်တင်များမှတဆင့် သင်၏ မျှဝေထားသော အချက်အလက်များထံ လူအများက ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအား သင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင် (ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သို့မဟုတ် လုံခြုံရေး၊ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဆက်သွယ်ရေးများ အတွက် WeChat ကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားခြင်းကဲ့သို့) ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကြေငြာချက်များကို အချိန်ကာလအလိုက် သင့်ထံ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို သင်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ သို့မဟုတ် SMS မှတဆင့် ပေးပို့ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ သင့်အကောင့်ကို ကာကွယ်ပေးရန်နှင့် WeChat တွင် အရေးကြီးသော အပြောင်းအလဲများအား သင်သိရှိစေရန်အတွက်သာ သီးသန့်အသုံးပြုသဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကြေငြာချက်များမှ သင်နှုတ်ထွက်ထားခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
အချို့သော တရားစီရင်ပိုင်နက်များတွင် မျိုးရိုး သို့မဟုတ် လူမျိုးရေးဇစ်မြစ်၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာ သို့မဟုတ် ဒဿနိကအမြင် သို့မဟုတ် တကိုယ်ရည်ရေကျန်းမာရေးကဲ့သို့ သင့်အချက်အလက်များဖြင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အမျိုးအစားအချို့အား "ထိရှလွယ်သည်" ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး အခြားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အမျိုးအစားများထက် ပိုမိုတင်းကြပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ WeChat ပေါ်တွင် သင်တင်လိုက်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ (ဓာတ်ပုံများ သို့မဟုတ် သင့်ကျောင်း သို့မဟုတ် လူမှုလှုပ်ရှားမှုဖြင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကဲ့သို့) သည် သင်၏ ထိရှလွယ်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြားသူများသို့ ဖွင့်လှစ်ပြသရာရောက်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်ပေးပါ။
WeChat အတွင်း ထိရှလွယ်သောသဘောကိုဆောင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းမပြုမီ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် သင့်လျော်မှုရှိ၊မရှိကို ကျေးဇူးပြု၍ ဦးစွာစဉ်းစားပေးပါ။
WeChat အတွင်း ထိရှလွယ်သောသဘောကိုဆောင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပို့စ်တင်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် သင်ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှုများ (ဥပမာအားဖြင့် - သင့်ပို့စ် သို့မဟုတ် ပရိုဖိုင်အချက်အလက်ကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိသူများအဖြစ် သင်ရွေးချယ်ထားသည့် အသုံးပြုသူ ပရိတ်သတ်များ တွေ့မြင်နိုင်ခြင်း) အတွင်း ထိုသို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို မြင်ခွင့်ပြုခြင်းအား သင်သဘောတူလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
WeChat ပြင်ပတွင် သင်၏ WeChat အချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်း
မျှဝေထားသော သတင်းအချက်အလက်များအား သင့် WeChat ကွန်ယက်ပြင်ပသို့ သင်မျှဝေနိုင်စေမည့် အခြားသော WeChat ဆက်စပ်ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ဆောင်ပေးထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - လူအများ ရယူကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဘလော့များနှင့် ဖိုရမ်များ သို့မဟုတ် WeChat အတွင်းရှိ အချို့သော လူမှုမီဒီယာဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များ ("plug-ins" (ဝဘ်ဆိုက်နှစ်ခုအကြား တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ဖန်တီးပေးသော ပရိုဂရမ်) နှင့် "widgets" (WeChat အတွင်း ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ဆောင်ပေးသည့် တုန့်လှယ်ဆက်သွယ်ရေး ပရိုဂရမ်ငယ်များ) ကဲ့သို့) သည် မျှဝေထားသော အချက်အလက်များ ပြန်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖွင့်ချခြင်းများကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေသော ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ WeChat မှ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုသို့သော ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုကာ သင်ဖြန့်ဖြူးသော သတင်းအချက်အလက်များအား ဖတ်ရှု၊ စုဆောင်း၊ အသုံးပြုသွားဖွယ် ရှိပါသည်။
သင်သည် သင့် WeChat အဆက်အသွယ်စာရင်းအား သင့်စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုအတွင်းမှ သင့်အကောင့်ပေါ်ရှိ သင်၏ အဆက်အသွယ်စာရင်းများတွင် ပါဝင်ပြီး WeChat အကောင့်တစ်ကောင့်လည်းရှိနေသည့် အဆက်အသွယ်များကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ထိုအကောင့်များဖြင့် ချိတ်ဆက်သွားဖွယ် ရှိပါသည်။ WeChat အနေဖြင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီတွင် သင်၏အဆက်အသွယ်စာရင်းကို ရယူသုံးစွဲခွင့်ပြုရန် သင်ထံတောင်းဆိုပေလိမ့်မည်။
WeChat အသုံးပြုကာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်း
WeChat သည် သင်၏ WeChat ဝန်ဆောင်မှုများအား သင်ရွေးချယ်ထားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လူမှုမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် သင့်ကိုချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပြီး ထိုသို့သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွင်းမှ အချို့သော အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များကို သင်က တင်သွင်းရန်အတွက်လည်း ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် -
သင်သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ဖော်ဆောင်ပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကာ WeChat ပါအကြောင်းအရာများကို မျှဝေခြင်း သို့မဟုတ် WeChat အကောင့်တွင်းသို့ လော့အင်ဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ဤပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် သင့်သက်သေခံအချက်အလက်ကို အတည်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အချို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေနိုင်မည့် ရွေးချယ်စရာများကိုလည်း ဖော်ဆောင်ပေးသွားပါမည်။ ၄င်းတို့အနေဖြင့် သင်၏ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုအကောင့်မှတဆင့် WeChat ပေါ်တွင် မျှဝေသော အချက်အလက်များအဖြစ် သတင်းအချက်အလက်များ ပို့စ်တင်နိုင်မည့် ရွေးချယ်စရာများကိုလည်း ပေးအပ်သွားဖွယ်ရှိပါသည်။
သင်သည် Open ID ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူတစ်ဦးကဲ့သို့သော လော့အင်ဝင်ရောက်ရန် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကာ WeChat အတွင်းသို့ လော့အင်ဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါသည်။ဤအကောင့်ဝင်ရောက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်အီသင့်သက်သေခံအချက်အလက်ကို အတည်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ သင့်အမည်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကိုလည်း အကောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် အကောင့်ဝင်ရောက်မှုများပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေနိုင်မည့် ရွေးချယ်စရာများကိုလည်း ဖော်ဆောင်ပေးသွားပါမည်။
ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်များကို သင်ရယူသုံးစွဲနိုင်စေမည့် (သို့မဟုတ် ထိုပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် တင်ထားသည့် WeChat အကြောင်းအရာများအတွင်း ရယူသုံးစွဲနိုင်စေမည့်) လင့်ခ်များ သို့မဟုတ် ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များအား သင့်အတွက် WeChat က (ကြော်ငြာများတွင်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် WeChat အတွင်းတွင်သော်လည်းကောင်း) ဖော်ဆောင်ပေးဖွယ်ရှိပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် WeChat အပလီကေးရှင်းမှ ထွက်စရာမလိုဘဲ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်က တင်ထားသော ဗီဒီယိုများကို သင်ရယူသုံးစွဲနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။
ပြင်ပလူမှုမီဒီယာများအား သက်ဆိုင်ရာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ဖန်တီးပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ WeChat ဝန်ဆောင်မှုများကိုမူ ကျွန်ုပ်တို့က ဖန်တီးပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ဆောင်ပေးအပ်လျက်ရှိသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် သင်၏ အချက်အလက်များ (သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် အကောင့်ဝင်ရန် အချက်အလက်များ အပါအဝင်) ကို စုဆောင်းသွားဖွယ်ရှိသကဲ့သို့ ထိုသို့သော ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များ မှန်ကန်ကျနစွာ ဆောင်ရွက်နေစေရန်အတွက် သင့်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ကွတ်ကီးများ သတ်မှတ်ခြင်းများများလည်း ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိပါသည်။
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ သင်ထုတ်ပေးသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ယင်းတို့ကို ၄င်းတို့စုဆောင်းအသုံးပြုခြင်းများ အပါအဝင် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများ (လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာ ဝန်ဆောင်မှုများသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အခြားအရာများ) ကို သင်၏ အသုံးပြုမှုသည် သက်ဆိုင်ရာ ထိုပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများအတိုင်းသာဖြစ်ပြီး WeChat ၏ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒများဖြင့် မသက်ဆိုင်သောကြောင့် ထိုပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဂရုတစိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါ။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုမူဝဝါဒဒါသည် ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသော အချက်အလက်များနှင့်သာ အကျုံးဝင်ပြီး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ကမ်းလှမ်းသော ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ အချက်အလက်ကျင့်ထုံးများဖြင့် အကျုံးဝင်ခြင်း မရှိပါ။ WeChat အတွင်းရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားသည့် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်များ (ဥပမာ - တရားဝင်အကောင့်တစ်ခုကို ဖောလိုးလုပ်ရန် သင်ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီနီ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်း) ကို သင်အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဆိုပါက ထိုဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးပြုနိုင်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဖြင့် အချို့သော သတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သွားပါမည်။ ဤသို့သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသော သတင်းအချက်အလက်များအား ထိုဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်ကို သင်အသုံးပြုသည့် ပထမဆုံးအကြိမ်တွင် သင့်ကိုပြသပေးပါမည်။ သင့် အကောင့် အတွင်းတွင် ဤသတင်းအချက်အလက်များအား မည်သည့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကို ရယူသုံးစွဲခွင့်ပြုမည်ဆိုသော ကိစ္စရပ်အား သင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။သင့်အနေဖြင့် ဤအချက်အလက်မျှဝေမှု သဘောတူညီချက်အား ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်လံဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသတင်းအချက်အလက်များအား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြင့် မျှဝေခြင်းမပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်တောင်းဆိုခဲ့လျင် ထိုဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ်ဖီးချားလုပ်ဆောင်ချက်အား သင်အသုံးပြုနိုင်တော့မည် မဟုတ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်ပေးပါ။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ သင်ထုတ်ပေးလိုက်သော အချက်အလက်များအား ၄င်းတို့အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။
WeChat အား ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအနေဖြင့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒအတွက် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ သဘောတူညီချက် (၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်နှင့် သင့်ကိုယ်စား) ကို ဦးစွာရယူခြင်းမပြုဘဲ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို WeChat ကို အသုံးပြုခြင်း မပြုရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များထံမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိုသို့သော သဘောတူညီချက်ကို ရရှိခြင်းမရှိဘဲ မျက်ကွယ်ပြု စုဆောင်းသွားမည် မဟုတ်ပါ။ အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးတစ်ယောက်ယောက်ထံမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိုသို့သော မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုမရဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအရာရှိထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိုသို့သော သတင်းအချက်အလက်များအား အလျင်အမြန် စုံစမ်း(၍ (ဖယ်ရှား)ပေးသွားပါမည်။
သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တည်နေရာ
သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား အောက်ဖော်ပြပါ နေရာများသို့ လွှဲပြောင်း၊ သိုလှောင်၊ စီမံဆောင်ရွက်သွားပါမည် -
ကနေဒါနိုင်ငံ အွန်တာရီအိုပြည်နယ် (ဤနေရာမှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ချမှတ်သည့် ကော်မရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2002/2/EC အရ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အကာကွယ်ပေးရန်အတွက် လုံလောက်သော အဆင့်အတန်းတစ်ရပ် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရ) နှင့်
ဟောင်ကောင် (တတိယနိုင်ငံများသို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ဥရောပ ကော်မရှင်၏ စံပုံစံ စာချုပ်များ (တနည်းအားဖြင့် စံပြုစာချုပ်ပြဌာန်းချက်များ) အပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ မှီခိုအားထားလျက်ရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2001/497/EC (ထိန်းချုပ်သူတစ်ဦးထံ လွှဲပြောင်းသော ဖြစ်ရပ်များ) နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2004/915/EC (စီမံဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးထံ လွှဲပြောင်းသော ဖြစ်ရပ်များ) အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။)
သင် WeChat သုံးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးပေးနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့နှင့် အခြားအဖွဲ့များသည် ကမ္ဘာတလွှားရှိ (စကာင်္ပူ၊ ဟောင်ကောင်နှင့် နယ်သာလန်ဒေသ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးခန်းများတွင် အခြေစိုက်ထားပြီး ဤဝန်ဆောင်မှုကို (ဥပမာ - သင်တင်ပြသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက်) ဖော်ဆောင်ပေးအပ်ရန် အလို့ငှာ အချို့သော သင်၏အချက်အလက်များကို မတော်တဆ ရယူသုံးစွဲနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော တတိယနိုင်ငံများသို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ဥရောပ ကော်မရှင်၏ စံပုံစံ စာချုပ်များ (တနည်းအားဖြင့် စံပြုစာချုပ်ပြဌာန်းချက်များ) အပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ မှီခိုအားထားလျက်ရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2001/497/EC (ထိန်းချုပ်သူတစ်ဦးထံ လွှဲပြောင်းသော ဖြစ်ရပ်များ) နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2004/915/EC (စီမံဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးထံ လွှဲပြောင်းသော ဖြစ်ရပ်များ) အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ရယူသုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖွင့်ချခြင်းများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ အမျိုးမျိုးနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးအပ်ထားသည့် အကဲဆတ်သော အချက်အလက်အချို့ (တည်နေရာအချက်အလက်) ကို ကာကွယ်ရန် စာဝှက်ကုတ်သုံး နည်းပညာ (SSL ကဲ့သို့) များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခြင်းအား ဆိုလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ယခုကဲ့သို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော်ငြားလည်း မည်သည့် အချက်အလက်လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှုမျိုးမဆို အချိန်ပြည့် ၁၀၀% စိတ်ချရခြင်း မရှိသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် WeChat ၏ လုံခြုံရေးကိုသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် WeChat မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်ထုတ်ပေးသော သတင်းအချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကိုသော်လည်းကောင်း ကတိပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံပေးခြင်းများ မရှိပါ။
သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသော အချိန်ကာလ
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် လိုအပ်ခြင်းမှအပ အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းသွားပါမည်။ သင်ကသော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကသော်လည်းကောင်း အကြောင်းတစ်ခုခုဖြင့် သင်၏ အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ရမည်ဆိုပါက ထိုသို့သော အကောင့်ပယ်ဖျက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ကြောင်းကျိုးသင့်လျော်သော အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အတွင်း (နည်းပညာအကန့်အသတ်များအရ) သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား WeChat မှတစ်ဆင့် မရရှိနိုင်တော့စေရေး သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့မှ တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်တော့စေရေးကို သေချာစေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။
မှတ်ပုံတင် အချက်အလက် သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ သင်ညွှန်ကြားသည့် သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ကြာသည်အထိ လော့အင်ဝင်ရောက်မှုမရှိသည့် အချိန်အထိ။ သင့်အကောင့်အား အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အတည်ပြုပြီး၍ အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။
အကောင့်ဝင်ရောက်သောဒေတာ အချက်အလက်များအား ထိုသို့သောအကောင့်ဝင်ရောက်မှုကို ပြုလုပ်သည့်ရက်မှ ၃ လကြာကာလအထိ လက်ဝယ်ထားရှိပါသည်။
အသုံးပြုသူပရိုဖိုင် ရှာဖွေမှု အချက်အလက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို သင်တောင်းခံသည့်အချိန်အထိ။
ပရိုဖိုင်ဒေတာနှင့် ပရိုဖိုင် မီဒီယာ (အားလုံးသော အသုံးပြုသူများမှ ကြည့်ရှုနိုင်) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို သင်တောင်းခံသည့်အချိန်အထိ။
ပရိုဖိုင်ဒေတာ (မိတ်ဆွေအတည်ပြုချက်အပေါ် ကြည့်ရှုနိုင်) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို သင်တောင်းခံသည့်အချိန်အထိ (သို့သော် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် သိုလှောင်ခြင်းခံထားရပါက အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်)။
အကောင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထပ်တိုးလုံခြုံရေး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို သင်တောင်းခံသည့်အချိန်အထိ (သို့သော် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် သိုလှောင်ခြင်းခံထားရပါက အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်)။
Chat – non-persistent and semi-persistent communication between users ချက် - အသုံးပြုသူများအကြား ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကြိုကြားကြိုကြာုး့ကြားကြို့ကြား ဆက်သွယ်မှုများ။ အချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ တုံ့လှယ်ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အချိန်မှ ၇၂ နာရီကြာ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးပါသည်။
အဆက်အသွယ်များ စာရင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို သင်တောင်းခံသည့်အချိန်အထိ။
တည်နေရာအခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် တည်နေရာအခြေပြု မီဒီယာ အချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ တုံ့လှယ်ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အချိန်မှ ၇၂ နာရီကြာ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးပါသည်။
Moments နှင့် အကြိုက်ဆုံး ဒေတာများ၊ မီဒီယာများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် ပယ်ဖျက်ခြင်းကို သင်တောင်းခံသည့်အချိန်အထိ (သို့သော် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင် သိုလှောင်ခြင်းခံထားရပါက အချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ဖွယ် ရှိပါသည်)။
OpenID နှင့် Open ID မီဒီယာ (ပြင်ပအဖွဲ့များသို့ ပေးထားသော) ပြင်ပဖန်တီးရှင်တစ်ဦး၏ အက်ပ်၊ Official Account၊ မီနီ ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် အလားတူအရာများကို သင်က ဖောလိုးလုပ်ခြင်း ရပ်တန့်သည့်အချိန်အထိ သို့မဟုတ် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းဖြစ်သည့် သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်သည့်အချိန်အထိ။
ပြင်ပထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခြင်း (တနည်းအားဖြင့် သင်သည် Official Account သို့မဟုတ် မီနီ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူဆိုပါက) သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ သင်ညွှန်ကြားသည့် အချိန်အထိ။ သင့်အကောင့်အား အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အတည်ပြုပြီး၍ အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖွင့်ချပေးထားသော အချက်အလက်များအား ၄င်းတို့က ထိန်းချုပ်ထားသည် ဆိုခြင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်ပေးပါ။ ထိုသတင်းအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ပယ်ဖျက်သည့်အခါတွင် ၄င်းတို့လည်း ပယ်ဖျက်စေရေးအတွက် ကြောင်းကျိုးဆီလျော်သော ကြိုးပမ်းမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပေးသွားပါမည်။
တရားဝင်အကောင် / မီနီပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့ ပေးအပ်ထားသော အချက်အလက် သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ ညွှန်ကြားသော သို့မဟုတ် သင့်ခွင့်ပြုချက်ကို ရုပ်သိမ်းသော / ထိုသို့သော ပြင်ပအဖွဲ့ကို ဖောလိုးလုပ်ခြင်းအား ရပ်တန့်သောအချိန်အထိ။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဖွင့်ချပေးထားသော အချက်အလက်များအား ၄င်းတို့က ထိန်းချုပ်ထားသည် ဆိုခြင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်ပေးပါ။ ထိုသတင်းအချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ပယ်ဖျက်သည့်အခါတွင် ၄င်းတို့လည်း ပယ်ဖျက်စေရေးအတွက် ကြောင်းကျိုးဆီလျော်သော ကြိုးပမ်းမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပေးသွားပါမည်။
စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပေးအပ်ထားသော အချက်အလက်များ သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ သင်ညွှန်ကြားသည့် အချိန်အထိ။ သင့်အကောင့်အား အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အတည်ပြုပြီး၍ အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။
မီတာဒေတာ / အကောင့်ဝင်ရောက်မှုဒေတာ အချက်အလက်များအား အကောင့်ဝင်ရောက်သည့်ရက်မှ ၃ လာကြာကာလတစ်ခုအထိ ထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက် ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။
ကိရိယာအချက်အလက် သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ သင်ညွှန်ကြားသည့် အချိန်အထိ။ သင့်အကောင့်အား အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အတည်ပြုပြီး၍ အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။
လှုမှုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု အချက်အလက် သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ ညွှန်ကြားသော သို့မဟုတ် သင်၏ WeChat အကောင့်မှ သင်၏ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်များကို ဖြတ်ရန် သင့်အကောင့်အား အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။
ကွတ်ကီးများ။ အချက်အလက်များအား အကောင့်ဝင်ရောက်သည့်ရက်မှ ၃ လာကြာကာလတစ်ခုအထိ ထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက် ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါအခန်းမှာ ဥရောပသမဂ္ဂတွင် နေထိုင်နေသူများအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ထံတွင် အခွင့်အရေးအချို့ ရှိပါသည်။ ဤအခွင့်အရေးအချို့သည် အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ အချို့သော အခြေအနေများတွင်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ထိုအခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးပုံနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ သင့်အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုမှုများအတွက် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မပြုမီတွင် သင်၏ မှတ်ပုံတင်ကို အတည်ပြုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုမည်ဆိုသည်ကို သတိပြုပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိုအခွင့်အရေးများကို အသုံးပြုရန် သင်၏တောင်းဆိုမှုအား နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိစေရဘဲ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် တစ်လအတွင်း မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည် (သို့သော် တောင်းခံမှုတွင် အချက်အလက်ပမာဏ များပွားလွန်းသော သို့မဟုတ် တနည်းနည်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နေသော ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့သော အအခြေအနေအချို့တွင် နောက်ထပ်နှစ်လကြာအထိ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်)။ သင်၏ အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤတောင်းခံလွှာကို ဖြည့်စွက်ပေးပြီး တင်သွင်းသော အဆင့်များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးပါ။
တောင်းခံလာသည့်အခါတွင် WeChat အနေဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားခြင်း ရှိ၊မရှိဖြင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအား သင့်အတွက် ထုတ်ပေးသွားပါမည်။ သင့်ထံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊ ယင်းတို့ကို အသုံးပြုပုံနှင့် ယင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေပေးသောသူများအကြောင်းကို ရယူကြည့်ရှုပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ သင့်ထံတွင် ထိုအချက်အလက်များကို အမှန်ပြင်ပိုင်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူကြည့်ရှုရန် သို့မဟုတ် အမှန်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် သင်၏ WeChat အကောင့် အတွင်းသို့ အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့် သင့်စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များ သို့မဟုတ် WeChat အတွင်းရှိ "တည်နေရာ ရှင်းလင်းခြင်း" ရွေးချယ်မှုမှတစ်ဆင့် သင်ထုတ်ပေးထားသော တည်နေရာအချက်အလက်အချို့ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
အခြားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု သင်ယုံကြည်လျင် သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်ကို အသုံးပြုကာ အမှန်ပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသော အချက်အလက်များကို အမှန်ပြင်လိုလျင် ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာမှ တောင်းခံလွှာကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ။ အချို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ခြင်းသည် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်ရာရောက်ပါက (ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းသည် အခြားသူတစ်ဦး၏ အချက်အလက်များကို ဖော်ဆောင်ပေးမည့် အခြေအနေ) ထိုသို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့်အတွက် ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တစ်ခုသည် မတိကျ သို့မဟုတ် မပြည့်စုံဟု ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသဘောတူသောအခါ အမှန်ပြင်ရန် တောင်းခံချက်များဖြင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ချပေးထားသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့လည်း အသိပေးသွားပါမည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ၄င်းတို့ကလည်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ အမှားကို အမှန်ပြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
သင့်အနေဖြင့် သင်၏ WeChat အကောင့်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြပေးထားသည့် အကောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အချို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့စီမံဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သင်ယုံကြည်ထားသည့် အခြားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား သင်ပြင်ဆင်စေလိုသည်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာမှ တောင်းခံလွှာကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုဖွယ် ရှိပါသည် -
သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားရန် မလိုအပ်တော့ဟု သင်ယုံကြည်လျင်၊
သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိထားပြီး ထိုသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို သင်ရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်း (နှင့် ထိုကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို စီမံဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကိစ္စ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မရှိတော့လျင်)
ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို တရားလက်လွတ် စီမံဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သင်ယုံကြည်လျှငလျင် သို့မဟုတ်
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းသည့်အချိန်တွင် သင်သည် အသက် ၁၃ နှစ်အောက်တွင်ရှိပြီး သင်၏အသက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်လျင်။
သင့်အချက်အလက်ကို ပယ်ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနေစဉ်တွင် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့) အား ကန့်သတ်နိုင်သည့် သင်၏အခွင့်အရေးကိုလည်း သင်ကျင့်သုံးဖွယ်ရှိသည်ကို မှတ်သားပေးပါ။
သို့သော် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားရန် ဥပဒေကြောင်းအရ ခိုင်လုံသောအကြောင်းင့်အရင်းများရှိပါက ကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်သွားမည် (ဥပမာ - ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများကို ခုခံချေပခြင်းများ၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်များ သို့မဟုတ် အချို့သော ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်) ဖြစ်သော်လည်း ဤကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ထံ အသိပေးသွားပါမည်။
သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကိုသာ ကန့်သတ်ခွင့်ပြုခြင်း
အချို့သောအခြေအနေများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသော သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန် ရည်ရွယ်ချက်မှအပ အခြားသော စီမံဆောင်ရွက်မှုများ မပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေး ဥပဒေအရ ခိုင်လုံသော အကြောင်းအရင်းများ ရှိနေလျင် ယင်းကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ပြုလုပ်ဖွယ် ရှိပါသည် (ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများကို ချေပရန် သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးကို ကာကွယ်ရန်တို့အတွက်)။
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား ရပ်တန့်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ချပေးထားသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသို့လည်း အသိပေးသွားပါမည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ၄င်းတို့ကလည်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ အမှားကို အမှန်ပြင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားသော ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအား ရပ်တန့်ကာ ထိန်းသိမ်းယုံမျှ ထိန်းသိမ်းထားရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်တောင်းဆိုသွားဖွယ် ရှိပါသည် -
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်သည် မှန်ကန်တိကျမှုမရှိဟု (ယင်းအား မှန်ကန်ခြင်းရှိ၊မရှိ အတည်ပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်နေသောကာလအတွင်း) သင်ယုံကြည်လျှလျင်၊
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့စီမံဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် မညီညွှတ်သည့်အတွက် ယင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ ပယ်ဖျက်လိုသော်လည်း (ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ထိန်းသိမ်းသိုလှောင်ရုံမျှသာ သင်အလိုရှိသောအခါ) သို့မဟုတ်
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မလိုအပ်တော့သည့်အလျောက် ယင်းအား ကျွန်ုပ်တို့က ပယ်ဖျက်လိုသော်လည်း (ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများအတွက် သက်သေထူရန်၊ အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရန်အတွက် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင်လိုအပ်လျှင်)
သင့်တွင် သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားသည့် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့၏ မိတ္ထူတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ယင်းတွင် သင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့စီမံဆောင်ရွက်နေသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (ဥပမာ - ချက်တင်အသုံးပြု ပြောဆိုဆက်သွယ်မှု၊ မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ထုတ်ပေးသော ပရိုဖိုင်ဒေတာများ) သို့မဟုတ် "သင့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့စီမံဆောင်ရွက်ပုံ"အခန်းတွင် ဖော်ပြထားချက်များနှင့်အညီ သင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်ထံတွင် ဤအချက်အလက်အား အများသုံးပုံစံဖြင့် စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားဖြင့် စက်နှင့်လည်းဖတ်၍ရသောပုံစံဖြင့် လက်ခံရယူပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ထို့အတူ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်အား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ကလွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက်လည်း တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ သင့်အချက်အလက်များအား ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် တင်သွင်းနိုင်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သို့ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းပေးရန် သင်ဆန္ဒရှိပါက ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပေးရန် အသေအချာ ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ နည်းပညာပိုင်းအရ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှသာလျင် ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဆိုသည်ကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိချပ်ပါ။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက လက်ခံရရှိပြီးနောက် ယင်း၏ လုံခြုံရေးနှင့် ယင်းကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ထို့အတူ အချို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ခြင်းသည် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ပါက (ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းသည် အခြားသူတစ်ဦး၏ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သွယ်ရေးလျို့ဝှက်ချက်များ သို့မဟုတ် ဥာဏဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များကို ဖော်ဆောင်ပေးမည့် အခြေအနေ) ထိုသို့သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့်အတွက် ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
သင့်အချက်အလက်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် အကျိုးစီးပွားအပေါ် အခြေခံကာ (ဥပမာ - အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အကောင့်ဝင်ရောက်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သော သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်အချိန်များ) ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော်လည်း ယင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခြင်းအား သင်က ကန့်ကွက်သွားဖွယ် ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော စီမံဆောင်ရွက်မှုကို သင်ငြင်းပယ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပြီး ဤနေရာမှဖောင်အား အကြောင်းအရင်းအသေးစိတ်နှင့်တကွ တင်သွင်းပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ယခင်က သင်ထုတ်ပေးထားသော သဘောတူခွင့်ပြုချက်အား ဤနေရာတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် အကျုံးဝင်သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပြဌာန်းချက်များအရ သင်ကရုပ်သိမ်းသွားဖွယ် ရှိပါသည်။
WeChat ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ကာကွယ်ရေး အကျဉ်းချုပ်
သင့်အကြောင်း မည်သည့်အရာများကို ကောက်ခံပါသလဲ။
သင်၏ WeChat အကောင့်ကို အသုံးပြုရန် သင်ပြင်ဆင်သောအခါနှင့် WeChat တွင် ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို (သင်၏ အခိုက်အတန့်များ ကဏ္ဍသို့ ဓါတ်ပုံများတင်ခြင်း သို့မဟုတ် တရားဝင်အကောင့်များကို စောင့်ဖတ်ခြင်း စသည်ကဲ့သို့) အသုံးပြုသောအခါ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ခံပါသည်။ သင့်အကောင့်ကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် သင်၏ အမည်ပြောင်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်နှင့် စကားဝှက်တို့ကို ကောက်ခံပါသည်။ အခြားအချက်အလက်များနှင့်လည်း သင့်ပရိုဖိုင်ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်...
သင့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုပါသလဲ။
သင့်အချက်အလက်များကို သင့်အား WeChat ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်၊ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် သင်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်နှင့် WeChat Open Platform ၏ ဖီးချားများကို လုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်အသုံးပြုနိုင်စေရန် အသုံးပြုပါသည်။ အကောင့်ပြင်ဆင်ရန်၊ ဆက်သွယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်၊ ပံ့ပိုးမှု ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်၊ WeChat ဖီးချားများကို လုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် WeChat ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် သင့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ သင့်အကောင့်အား အတည်ပြုရန်နှင့် ကာကွယ်ပေးရန်၊ ထို့အပြင် အရေးကြီးသော စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာကဲ့သို့ သင်ထည့်သွင်းပေးထားသော ဆက်သွယ်ရန်လမ်းကြောင်းများကို WeChat က အသုံးပြုမည်ဖြစ်၍ ထိုဆက်သွယ်ရန်လမ်းကြောင်းများကို ပရိုမိုးရှင်းများ သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်...
သင့်အချက်အလက်များကို မည်သူတို့ထံ ကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေပါသလဲ။
အကောင့်အတည်ပြုရန်၊ မြေပုံပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးတည့်သည့် တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ စသည်တို့အတွက် SMS ထောက်ပံ့ပေးသူများကဲ့သို့သော ပံ့ပိုးရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။ ဤမူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင့်အချက်အလက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းရန်အတွက်သာ ထိုပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ Tencent ကုမ္ပဏီများအုပ်စုနှင့် ဥပဒေအရလိုအပ်သည့်အတိုင်းသာ သင့်အချက်အလက်များကို မျှဝေပါသည်။ ရှေ့တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ မဟုတ်လျှင် တိကျသော သင်၏ ကြိုကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မပါဝင်ဘဲ သင့်အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံ WeChat က မျှဝေခြင်း မပြုလုပ်ပါ။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်...
သင့်အချက်အလက်များကို မည်သည့်နေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသလဲ။
အွန်တာရီယို၊ ကနေဒါနှင့် ဟောင်ကောင်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာများ ရှိပါသည်။ WeChat ကို သင့်ထံ ထောက်ပံ့ပေးပေးနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးမည့် ပံ့ပိုးရေး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အခြားအဖွဲ့များ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ရှိပါသည်။ ထိုနေရာများမှလည်း သင့်အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အဖွဲ့များက သင့်အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်အား တိကျစွာကန့်သတ်ထားရန် တင်းကျပ်သော ရုံးတွင်းထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ထားပါသည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်...
သင့်အချက်အလက်များကို အချိန်မည်မျှကြာအောင် ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားပါသလဲ။
သင့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသည့် အချိန်ကာလမှာ အချက်အလက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပါသည် - ဥပမာအားဖြင့် အကောင့်ဝင်ရောက်မှုအချက်အလက်များကို အချက်အလက်အား ကောက်ခံသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာအောင် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ သင်၏ WeChat အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ရန် သင်ညွှန်ကြားခဲ့ပါက အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအား အတည်ပြုပြီး၍ အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုအား လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း သင့်အချက်အလက်များကို ပယ်ဖျက်ပါသည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်...
ကျွန်ုပ်၏ အချက်အလက်များအပေါ် ကျွန်ုပ်၏ အခွင့်အရေးများအား မည်ကဲ့သို့ အသုံးချနိုင်ပါသလဲ။
သင့်အချက်အလက်များအပေါ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်သည့် ပုံစံအပေါ် သင့်တွင် အထူးအခွင့်အရေးများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့တွင် အချက်အလက်များကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပုံစံ၊ အချက်အလက်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သင့်အချက်အလက်များအား မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်မည်ကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ ယင်းအား အသုံးပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် သင့်အချက်အလက်များ၏ မိတ္တူတစ်စုံ ရယူခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်...
အပြောင်းအလဲများအကြောင်း သင့်အား မည်ကဲ့သို့ အသိပေးပါမည်လဲ။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတွင် အရေးပါသော မည်သည့်အပြောင်းအလဲမဆို ရှိခဲ့ပါက ထိုပြောင်းလဲမှုများ အကျိုးမသက်ရောက်သေးမီ သင့်ထံ အသိပေးချက် ပေးပို့ပါမည်။ ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေရှင်းမပေးရသေးသည့် မဖြေရှင်းရသေးသော ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု သို့မဟုတ် အချက်အလက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခု သင့်တွင် ရှိနေပါက https://feedback-form.truste.com/watchdog/requestတွင်ရှိသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ထောက်ပံ့ပေးသူထံ (အခမဲ့) ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်...
အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအတွက် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်
သင့်တွင် မည်သည့်ကိစ္စရပ်များမဆို သို့မဟုတ် တိုင်ကြားရန်များ ရှိနေပါက ဤနေရာ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ။
အချက်အလက် ထိန်းချုပ်သူများ -
ဥရောပ စီးပွားရေး နယ်မြေနှင့် ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရှိသော အသုံးပြုသူများ - Tencent International Service Europe BV။
ဥရောပ စီးပွားရေး နယ်မြေနှင့် ဆွစ်ဇာလန် ပြင်ပတွင်ရှိသော အသုံးပြုသူများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) - Tencent International Service Pte. Ltd။
သင်က အောက်ပါတို့မှ တစ်ခုဖြစ်လျှင် -
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (တိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင် သို့မဟုတ် မကာအိုတို့မှလွဲ၍)("PRC" ဖြစ်သူများ) တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဖြင့် တွဲဖက်၍ မှတ်ပုံတင်ထားလျှင် ((ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကုတ် +86 အသုံးပြုသော ဖုန်းနံပါတ်))၊ သို့မဟုတ်
Weixin သို့မဟုတ် WeChat အတွက် 深圳市腾讯计算机系统有限公司(Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited) နှင့် စာချုပ် ချုပ်ထားလျှင် (ဥပမာ - Weixin သို့မဟုတ် WeChat ကို PRC iOS အက်ပ်စတိုး သို့မဟုတ် PRC Android အက်ပ်စတိုးထံမှ ဒေါင်းလော့ပြုလုပ်ထားလျှင်)၊
ဤမူဝါဒကို သင်လိုက်နာရမည်မဟုတ်ဘဲ Weixin ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် Weixin ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒတို့ကို သင်လိုက်နာရပါမည်။
အချက်အလက် ကာကွယ်ရေး အရာရှိ -
အီးမေးလ် - dataprotection@wechat.com
စာတိုက်လိပ်စာ - 26.04 on the 26th floor of Amstelplein 54, 1096 BC Amsterdam, the Netherlands
မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်- သင့်အမည်၊ အသုံးပြုသူ အမည်ပွား၊ စကားဝှက်၊ ကျား/မ၊ IP လိပ်စာ သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ သင်ညွှန်ကြားသည့် သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ကြာသည်အထိ လော့အင်ဝင်ရောက်မှုမရှိသည့် အချိန်အထိ။ သင့်အကောင့်အား အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အတည်ပြုပြီး၍ အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။
မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်- အကောင့်အား မှတ်ပုံတင်ရန် အသုံးပြုသော မိုဘိုင်းနံပါတ်၊ QQ၊ Facebook၊ Google သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ သင့်အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် WeChat သို့ သင်ညွှန်ကြားသည့် သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ကြာသည်အထိ လော့အင်ဝင်ရောက်မှုမရှိသည့် အချိန်အထိ။ သင့်အကောင့်အား အကောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကို အတည်ပြုပြီး၍ အကောင့်ပယ်ဖျက်ရန် သင်၏ တောင်းခံမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးသွားပါမည်။ အကောင့်ဖျက်ပြီးသည့်နောက်တွင် စုစည်းထားသော မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များအား အနှောင့်အယှက်မက်ဆေ့ခ်ျကာကွယ်ရေးနှင့် စနစ်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် ထိန်းသိမ်းရယူထားဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Chat – non-persistent and semi-persistent communication between users ချက် - အသုံးပြုသူများအကြား ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကြိုကြားကြိုကြာုး့ကြားကြို့ကြား ဆက်သွယ်မှုများ။ အချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ တုံ့လှယ်ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အချိန်မှ 120 နာရီကြာ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးပါသည်။
တည်နေရာအခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် တည်နေရာအခြေပြု မီဒီယာ အချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာ တုံ့လှယ်ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်သည့်အချိန်မှ 24 နာရီကြာ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ထာဝရ ပယ်ဖျက်ပေးပါသည်။
အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ကျွန်ုပ် ဖတ်ရှုပြီးဖြစ်၍ သဘောတူပါသည်